Ny alatsinainy maraina, ireo mpitandro filaminana avy any Frantsa dia nanao hetsika mba hitazonana ireo olona ahiahiana handray anjara amin'ny fanafihana mitam-piadiana an'i Kim Kardashian any Paris tamin'ny volana oktobra lasa teo.
Ny fizotry ny fisamborana
Ny tranga mampihetsi-po momba ny fandrobana an'i Kim Kardashian, 36 taona, tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tao Paris, izay nitranga tamin'ny alin'ny 3 Oktobra, dia nifindra avy amin'ny foibe maty. Tao an-drenivohitra sy tany atsimon'i Frantsa dia olona 17 no nogadraina tamin'izany fotoana izany, anisan'izany ireo olona efa nentina ho andraikitry ny heloka bevava. Voalaza fa mpitarika ny vondrona i Pierre B. 72 taona.
Araka ny voalazan'ireo mpanao famotorana, ireo olona ireo dia mifandray mivantana amin'ny fandaminana ny fanagadrana amin'ny telly, ka vokatr'izany dia an-tapitrisa dolara no nangalarina, ary i Kim mihitsy no nahazo ny adin-tsaina lehibe indrindra. Ao amin'ny sehatry ny heloka bevava, nandao ireo fanondranana an-doha maromaro ny mpanongam-panjakana tamin'ny fifandimbiasana, izay very, ary namela fonosana nangalatra nangalatra, izay nahafahana nanamarina ny maha-jiolahy iray.
Tao amin'ny tambajotra dia nisy sary maromaro nangalatra an'i Kim Kardashian
Raha azo atao ny mijery ireo mpanao gazety, eo amin'ireo voafonja dia misy ny mpamily Kim Kardashian. Ny kintana dia nampiasa foana ny asa nataon'io lehilahy 27 taona io nandritra ny diany tany Paris. Ny mpitandro filaminana dia azony antoka fa izy no mpampita vaovao lehibe momba ny jiolahy ary nitatitra tamin'izy ireo ny hetsika rehetra nataon'i Kim sy ny fianakaviany.
Hanampy isika, aorian'ny 96 ora manomboka amin'ny fotoana fisamborana, aorian'ny fakàna am-bavany sy fanamarinana ny fijoroana vavolombelona, ​​dia ho voampanga na havoaka ireo ahiahiana.
Tao Frantsa dia nisambotra olona nahiahina an-keriny tamin'i Kim Kardashian
Alessandra Ambrosio dia tonga tamin'ny famoahana ny sarimihetsika vaovao niaraka tamin'ny mpampakatra sy ny zanany roa
Tsy afaka mihira any Argentine i Justin Bieber
Uma Thurman dia miorina ao amin'ny nosy St. Barth ao amin'ny orinasa lehilahy iray tsy fantatra
Mpihira Prince sy ny zanany
Stevie Wonder sy Madonna dia nankalaza ny tsingerin 'ny printsy momba ny Billboard Music Awards-2016
Taylor Swift no mpihira ambony indrindra amin'ny Forbes
Moa ve marary i Ashley Olsen?
Kristen Stewart - fiainana manokana 2015
Hita tao amin'ny "http://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=catlin_en_ener&oldid=12275525
Ny fanambaran'I Kim Kardashian bevohoka no nanohina ny mpankafy azy!
Jim Carrey dia niampanga ny fahafatesan'ny saka iray
Ahoana ny fomba hanaovana saka amin'ny taratasy?
Ahoana no hiterahan'ny kambana?
Ryan Gosling sy Emma Stone
Nahoana isika no manonofy karazana?
Nahoana ny zaza no tsy mahatsiaro tena?
Psychology taona - ny foto-kevitra momba ny taonan'ny taona sy ny taonan'ny psychologie
Ny Monastera Carthusian
Sary hosodoko am-panoritana ho an'ny trano anatiny
Mangirifiry ny tongotrareo rehefa avy mihazakazaka?
Salady miaraka amin'ny fuchozoy - fomba mahazatra mahavelona ho an'ny sakafo mahavelona
Afisy any Frantsa - akanjo ho an'ny vehivavy
Ny maso mitroka Tiotriazoline
Misintona amin'ny savony savony
Krôlôjia eo afovoan'ny efitra fandraisam-bahiny